मानव शरीर बाहिरै रक्तनली बनाउने पद्दति आविष्कार भएको छ : डा. प्रसाई | Sarathi News
मानव शरीर बाहिरै रक्तनली बनाउने पद्दति आविष्कार भएको छ : डा. प्रसाई
डा. नुतन प्रसाई
November 9, 2014 | 10:11 pm
अमेरिकाको इन्डियाना युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिसिनमा कार्यरत एक नेपाली वैज्ञानिक डाक्टर नुतन प्रसाईंको नेतृत्वमा मानवशरिरमा रक्तनलीको निर्माण गर्न सकिने पद्धतीमा सफलता हात लागेको छ । प्रसाईको नेतृत्वमा झण्डै २ दर्जन शोधकर्ताहरुको लामो समयदेखिको प्रयासपछि यो सफलता प्राप्त भएको हो । रक्तनलीमा खराबी आएका कारण मान्छेको अंग नै काट्नुपर्ने जस्ता समस्याहरु आउने भएकाले मानवशरिरमा रक्तनलीको निर्माण गर्न सक्ने यो पद्धतीले त्यस्ता समस्याहरु समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मुसामा सफलतापूर्वक परिक्षण गरिएको यो पद्धती मानव शरिरमा प्रयोग गर्न भने अझै केही समय लाग्ने भएको छ । मुसामा यसको परिक्षण गर्दा मान्छेकै रक्तनलीको विकाश भएको रोचक तथ्य फेला परेको पनि डाक्टर प्रसाईले जानकारी दिएका छन् ।
मोरङको बिराटचोकमा मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मनुभएका प्रसाईले मोरङको इन्द्रपुरमा रहेको सरकारी विद्यालय सुकुना माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका थिए । त्यसपछि विराटनगरको विराट साइन्स क्याम्पसमा अध्ययन गरेका प्रसाईले त्यहाँ आईएस्सी गरिसकेपछि भारतको राजिव गान्धि युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्समा फार्मास्युटिकल साइन्स अध्ययन गरे । डिस्टिङसनमा डिग्री हासिल गरिसकेपछि उनले केही समय फार्मासिस्टका रुपमा समेत काम गरे । त्यसपछि उनी अमेरिकामा गए र वायोलोजीमा मास्टर्स गरे भने बायोमेडिकल साइन्समा डक्टरेट गरे । सन् २००९ मा पीएचडी गरिसकेपछि उनले इन्डियानापोलिसस्थित इन्डियाना युनिभर्सिटीमा डाक्टर योदरको ल्याबमा काम सुरु गरे । त्यही अनुसन्धानका क्रममा उनी नेतृत्वको टोलीले रक्तनलीको निर्माण गर्न सकिने पद्धतीमा सफलता हासिल गरेको हो । प्रस्तुत छ डाक्टर नुतन प्रसाईसँग अमेरिकाबाट प्रकाशित भइरहेको खसोखास साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक किशोर पन्थीले गरेको कुराकानी ।
विशेषगरी कुनै व्यक्ति बुढो हुँदै गएपछि वा कुनै रोगका कारणले रक्तनलीहरुले काम काम गर्ने वा काम गर्न बन्द गर्ने अवस्था आउँछ । त्यो अवस्थामा रक्तनलीले काम नगरेपछि कुनै पनि अंग प्रत्यंगमा रगत नपुग्दा समस्या पैदा हुन्छ । त्यसलाई हटाउने उपचारपद्धति अहिलेसम्म केही पनि छैन । रक्तनलीमा समस्या आएमा अहिलेसम्म यसको पूर्ण समाधान गर्ने कुनै उपाय छैन । रक्तचापलाई खुम्च्याउने र बढाउने केही औषधीहरु त छ । तर संरचनागत हिसाबले रक्तनली ड्यामेज भएमा उपचार गर्ने पद्धती नै छैन । त्यसैले यो उपलब्धीबाट शरिरमा नयाँ रक्तनली नै बनाउन सक्ने प्रविधिको विकाश हुने सम्भावना देखिएको छ । शरिरको कुनै पनि टिस्यु वा अंगलाई बाँच्नका लागि रगतको फ्लो चाहिन्छ । त्यरक्तनलीको निर्माण गर्न सकिने यो उपलब्धी कस्तो खालको उपलब्धी हो ?
ही रगतको फ्लो बनाउने नली बनाउन सम्भव भएको कुरा यो शोधबाट पुष्टि भएको छ ।
यो उपचारपद्धती अनुशार नयाँ रक्तनलीहरु कसरी बनाइन्छ ?
यो कुनै रसायन वा औषधी होइन । यो कुनै व्यक्तिको शरिरको सेल लिएर त्यसमा निश्चित प्रकारको जिन हालिन्छ । यो कुनै डाक्टरले शरिरबाट केहीमात्रामा रगत निकालेजस्तै हो । सेलबाट स्टेमसेल बनाइसकेपछि त्यसबाट बाहिरै रक्तनली बनाउने सेल निर्माण गर्न सकिनेभयो । त्यो सेल इन्जेक्सनबाट शरिरमा दिएपछि त्यसले शरिरभित्र रक्तनलीको निर्माण गर्छ । शरिरबाट बाहिरै कसरी अंगको निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा रिसर्चहरु भइरहेका छन् । कसैले कुनै अंग बनाउने हो भने पनि त्यो अंगलाई बाँच्न रक्तप्रवाह आवश्यक हुन्छ । शरिरभन्दा बाहिर त्यस्ता टिस्यु वा अंगहरु बनाउँदा पनि रक्तनलीको आवश्यकता पर्छ । यो सेल त्यहाँ पनि प्रयोग हुनसक्छ । शरिरका अंगहरु बाहिर बनाउँदा मात्र नभई शरिरभित्रै रक्तनली निर्माणका लागि यो सेलको प्रयोग हुनसक्छ । त्यस्तै शरिरबाहिर नै रक्तनली बनाएर नली नै शरिरमा हाल्ने प्रविधिमा पनि यो प्रयोग हुनसक्छ । मुटुको बाइपास सर्जरी गर्दा खुट्टाको रक्तनली निकालेर मुटुमा हालिन्छ । त्यो लामोसमय टिकाउ हुँदैन । पाँचसातवर्षमा काम गर्न छोड्ने अवस्था आउँछ । फेरी नयाँ हाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ । बिल क्लिन्टनको दुईपटक, डिक चेनीको दुईपटक मुटुको सर्जरी गर्नुपरेको हो । तर नयाँ प्रविधि अनुशार शरिरबाहिर नै रक्तनली बनाएर हाल्न सकिने र टिकाउ हुने हुनसक्छ । हामीले हासिल गरेको सफलता मानवमा परिक्षण भएको छैन । यो केवल मुसामा परिक्षण गरिएको हो । रमाइलो कुरा त के छ भने मान्छेको सेल मुसाभित्र हाल्दा मुसामा मान्छेको रक्तनली निर्माण भयो । त्यसपछि यो मुसाको रक्तनलीसँगको अरु सर्कुलेसनसँग समेत जोडियो । त्यसपछि मुसाको रगतलाई आफ्नो रक्तनलीमा बगायो ।
सेल निकालेर बाहिर रक्तनली निर्माण गर्नका लागि कति समय लाग्छ ? कत्तिको खर्चिलो हुन्छ ?
यो निकै खर्चिलो हुन्छ । अहिले हामीले व्यवसायिक स्तरमा गरेका छैनौं । व्यवसायिक स्तरमा गएर आम उत्पादन हुन थालेमा खर्च निश्चय पनि कम हुन्छ । हामीले यो परियोजना चारवर्षदेखि गर्दा लाखौं डलर खर्च भएको छ । परिक्षणको क्रममा भएकाले खर्च यति नै लाग्छ भन्न सकिन्न । समयको कुरा गर्दा शरिरबाट निकालेर रक्तनली निर्माणगर्ने स्टेमसेल बनाउँदा ९ देखि १२ दिन लाग्छ । स्टेमसेल सुरुमा थोरै हुन्छ । त्यसलाई बढाउदै लैजानुपर्छ । प्रयाप्त स्टेमसेल बनाउँदा एकमहिनाजति लाग्छ । दुई अढाई महिनाको समयअवधिमा शरिरमा प्रत्यारोपण गर्न सकिने सेलको निर्माण हुन्छ ।
यो रिसर्च पूरा गर्दाको पृष्ठभूमी कस्तो रह्यो ?
मलाई सानैदेखि हाम्रो शरिरको अंगको विकाशबारे निकै चासो थियो । शुक्रकिट र डिम्ब मिलेर बनेको एउटा सेलबाट मान्छेको पूरै शरिर कसरी बन्छ भन्नेमा मलाई निकै चासो थियो । सेलबाट मान्छेको निर्माणहुँदा पहिलो रक्तनली कसरी बन्यो, अंगहरु कसरी बने भन्ने विषयमा निकै खुल्दुली लाग्थ्यो । अमेरिकामा पढ्न आइसकेपछि मैले रक्तनलीकै विषयमा बढी फोकस गरें । रक्तनली कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको ज्ञान भएमा धेरै कुराको निदान गर्न सकिन्छ भन्ने सोंच मभित्र थियो । त्यसैले म यो रिसर्चमा लागें । यो प्रोजेक्ट मेरो नेतृत्वमा भएको हो । तर यसमा हामी झण्डै दुईदर्जन जतिको टिम छ । म एसिस्टेन्ट रिसर्च प्रोफेसर हुँ । डाक्टर योदर म काम गर्ने सेन्टरको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ । उहाँको प्रत्यक्ष सहयोगमा हामीले यो रिसर्च पूरा गरेका हौं ।
मान्छेमा रक्तनली निर्माणको पद्धती उपयोग गर्न अझै कति समय लाग्ला ?
मान्छेमा उपयोग गर्नका लागि हामी आतुर छौं । तर हतारो गर्दैनौं । मान्छेमा कुनै पनि परिक्षण गर्दा प्रोटोकलहरुमा ध्यान दिनुपर्छ । ट्युमर बढ्नका लागि पनि रक्तनलीको बृद्धि हुन्छ । त्यसैले ट्युमर नबढोस्, चाहिनेमात्र रक्तनली बनोस् भन्नका लागि थप परिक्षणहरु आवश्यक छ । सबै प्रकृया पूरा नगरेसम्म मान्छेमा जान मिल्दैन । क्लिनिकल परिक्षणमा जान तीनचारवर्ष लाग्नसक्छ । विभिन्न चरणहरु पारगरेर मान्छेमा पूर्ण सफलता प्राप्त गर्नका लागि केहीवर्ष लाग्छ ।
कस्ता रोगको उपचारका लागि यो पद्धती फलदायी सावित हुनसक्ला ?
खासगरी यो कार्डियोभास्कुलर रोगका लागि फलदायी हुनसक्छ । यस्तो रोगबाट अमेरिकामापनि धेरै मान्छेहरुको मृत्यु भइरहेको छ । मुटु र रक्तनलीसम्बन्धि समस्याहुने रोगको उपचारका लागि यो पद्धतीले सहयोग गर्नेछ । मधुमेह जस्ता रोगको उपचारमा पनि यो सहयोगसिद्ध हुनसक्छ । रक्तनली खराब भएर मधुमेह हुने होइन तर मधुमेह भएपछि रक्तनली बिग्रन्छ । रगतमा सुगरकोमात्राले रक्तनली बिगार्छ । मधुमेहहुँदा अन्धोपन हुने वा खुट्टामा घाउहरु निको नहुने समस्या हुन्छ । कहिलेकाँही त खुट्टै काट्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । रक्तनलीकै कारणले खुट्टा काट्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता रोगको उपचारका लागि हाम्रो रिसर्चको उपलब्धी सहयोगसिद्ध हुनसक्छ ।
नेपालमा धेरै युवा नयाँ नयाँ सोधका लागि उत्साहित छन् । त्यस्ता युवाहरुलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
नेपालमा रहनुभएका युवाहरुले जति आफ्नो स्तरबाट सकिन्छ, त्यो गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । सपना ठूलो राख्नुपर्छ । कसैले नेपालमा बसेर अन्तरिक्षमा जाने सपना राख्छ भने ठूलो सपना देख्न बन्द गर्नुहुन्न । नेपालमा नासाजस्तो संस्था भएको भए सजिलो हुने थियो । तर त्यो नभएपनि सपनादेख्न छाड्नुहुदैन । केहीवर्षअगाडि भारतीय अन्तरिक्षयात्रीहरु पनि अमेरिकामा आएर अन्तरिक्षमा गइरहेका छन् । अन्तिम लक्ष्य अन्तरिक्षमा जाने हो भने नासामा जाने लक्ष्य लिनुपर्छ । नासामा जान कहाँ पढ्नुपर्छ, के पढ्नुपर्छ त्यतातिर लाग्नुपर्छ । अहिले संसार एउटा गाउँजस्तै भएको छ । नेपालीले चाहेभने विदेश आएर पढ्नै नसक्ने भन्ने छैन । पढ्न नसक्ने नेपालीहरु पनि हुनुहुन्छ । तर पढ्न सक्ने नेपालीहरु पनि धेरै हुनुभएको छ । त्यसैले नेपालको अवस्थालाई हेरेर केही गर्न सकेनौं भनेर बस्नु हुँदैन । जहाँ गएर जसरी सकिन्छ गर्नुपर्छ । कसैले नेपालमै बसेर काम गर्नुपर्छ । कसैले नेपाल बाहिर गएर आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । हिम्मत नहारिकन काम गर्नुपर्छ । लक्ष्यमा अवश्य पुगिन्छ । (साभार : खसोखास साप्ताहिक)